Madax Waynaha Maamulka La Liga Ee Javier Tebas Oo Shaaciyay In Lionel Messi Uu Saxiixay Heshiiska Cusub Ee Uu Camp Nou Ku Sii Joogi Doono Iyo Qandaraaska Cusub Ee Messi Oo Maamulka La Liga Loo Gudbiyay. – WWW.Gool24.net
Madax Waynaha Maamulka La Liga Ee Javier Tebas Oo Shaaciyay In Lionel Messi Uu Saxiixay Heshiiska Cusub Ee Uu Camp Nou Ku Sii Joogi Doono Iyo Qandaraaska Cusub Ee Messi Oo Maamulka La Liga Loo Gudbiyay.
Madax waynaha maamulka horyaalka La liga ee Javier Tebas ayaa niyada u dajiyay jamaahiirta kooxda Barcelona ee cadhada wayn u qabay maamulka uu hogaaminayo Josep Maria Bartomeu kuwaas oo lagu eedaynayay sababta ayna Lionel Messi uga saxiixin heshiiska cusub ee la doonayay in xidiga ree Argentina uu Camp Nou ku sii joogo, laakiin Javier Tebas ayaa ku dhawaaqay in Lionel Messi uu saxiixay heshiiska cusub isla markaana in uu rasmi noqdaa ayna u baahnayn in lagu dhawaaqo.
Hadalka Javier Tebas ayaa ku soo aaday waqti ay jamaahiirta kooxda Barcelona si wayn uga walwalsan yihiin in Lionel Messi uu dhamaadka xili ciyaareedkan si xor ah kaga bixi karo Camp Nou maadaama oo uu qandaraaskiisa hore dhacayo dhamaadka xili ciyaareedkan 2017/18.
Javier Tebas ayaa cadeeyay in mar haddii uu ciyaartoyga heshiiska saxiixo in ku dhawaaqista kooxdu ayna ahayn waxa heshiiska ka dhiga mid rasmi ah wuxuuna cadeeyay in loo soo gudbiyay warka ah in Messi uu qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu Barcelona ku sii joogayo.
Madax waynaha kooxda Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa dhawr jeer oo hore cadeeyay in Lionel Messi aabihii uu qandaraaska cusub saxiixay isla markaana waxa ka hadhsani ay tahay in Lionel Messi uu sawirka lagu soo bandhigayo galo.
Dhinaca kale madaxa fulinta Barcelona ee Oscar Grau ayaa isna cadeeyay in kooxdiisu ay diyaar u tahay in Lionel Messi ay u soo bandhigto heshiikii Andres Iniesta oo kale kaas oo uu xidiga ree Argentina noloshiisa oo dhan uu Barcelona ku qaadan karo.
Madax waynaha maamulka La Liga ee Tebas oo ka hadlayay heshiiska cusub ee Lionel Messi uu qalinka ku duugay ayaa yidhi: ” Messi waxa uu haystaa qandaraas la cusboonaysiiyay. Heshiisyadu waxay rasmi noqdaan marka la saxiixo ee rasmi ma noqdaan marka lagu dhawaaqo in la saxiixay”.
Laakiin madax waynaha La Liga ee Javier Tebas ayaa si aanu hadalkani ugu soo noqon waxa uu sameeyay afeef wuxuuna yidhi: ” Messi waxa uu u saxiixay Barcelona, haddii aan aniga been la ii sheegin, isagu wuu saxiixay”.
Hadalka Javier Tebas ayaa cadayn buuxda u noqday in maamulka Barcelona wixii ay hore saxaafada uga sheegeen uu xafiiskiisa soo gaadhay isla markaana uu Messi saxiixay qandaraska cusub ee uu Camp Nou ku sii joogi doono laakiin jamaahiirta Balaugrana ayaa wali doonaya in heshiiskan si rasmi ah loogu dhawaaqo oo saxaafada loo soo bandhigo.